Ooyaaye! – Kaasho Maanka
Culimada soomaalidu, badankood, waa dad aad iyo aad afsoomaaliga u neceb. Nacaybka ay afsoomaaliga u qabaan waxa uu ku beermay markii ay afcarabiga si xun u jeclaadeen.
Waxa la yiri aakhiro waxa lagu hadli doonaa afcarabi, ninkii afcarabiga si aad iyo aada ugu daldalmi og waxa uu si fiican u shukaansan doonaa xuuralciinta jannada dhooban. Waa sababtaas sababta culimada Soomaaliyeed afcarabiga u jeclaadeen.
Anigu illaa iyo yaraantaydii waa aan ogaa in culimadu afsoomaaliga neceb yihiin se nacaybkooda ay qarsadaan ama diimayaan si aan looga garan. Xataa mararka qaar marka ay afcarabiga ku hadlayaan waa ay is oohiyaan dadkuna waxa ay u maleeyaan in ay Alle ka cabsi ka tahay se Alle ka cabsi kama aha ee waa ka carabi jacayl, waayo weli lama arag wadaad isagoo afsoomaali ku hadlaya ooyaaya. Marka keliya ee ay is boohiyaan, is balanbaliyaan ama is bihin bihiyaan waa marka ay carabiga ku hadlayaan. Waayo aad baa ay u jecel yihiin, jacaylkuna ma aha wax si fudud lagu qarsan karo.
Nacaybka ay afsoomaaliga u qabaan oo sida aan soo sheegay ah nacayb gaamuray oo dhuuxa iyo dhiigga ba raacay, waxa uu keenay in culimada Soomaalidu ay nacaan cid kasta oo afsoomaali ku heesta. Taa bedelkeed waxa ay si fiican habeenkii iyo maalintii ba u dhagaystaan heesaha afka carabiga ku baxa ee loo yaqaan “nashiidooyinka.” Taasi waxa ay keentay in fanaaniinta iyo culimadu noqdaan laba koox oo aad isu neceb oo mid kastaa midka kale uur kutaalo u hayo.
Haddii aad wadaad noqoto nacaybka ugu horreeya waxa aad u qaadaysaa fannaanka afka soomaaliga ku heesa. Inta aadan shaydaanka nicin waa in aad fannaaniinta nacdaa, waayo fannaaniintu afsoomaaliga ayaa ay kugu soo noolaynayaan adiguna afsoomaaliga waa aad neceb tahay oo nacaybkaas isla shaydaan ayaa habeen madow kugu beeray. Talaxumadii shaydaanka weeye waxa aad uga gubanayso afkaago hooyo oo aad u jeclaanayso af reerayow kale leeyihiin. Sidoo kale haddii aad fannaan noqoto waa in aad culimada la dirirtaa ama ugu yaraan ka carartaa waayo waa ay ku neceb yihiin oo shaydaan baa kugu soo naanaabay.
QORMO LA XIRIIRTA: Carruur
Cadaawaddaasi waxa ay noqotay cadaawad guun ah oo waayo badan ka dhex aloosnayd fannaaniinta iyo culimada, mana aysan helin cid u kala gar qaadda.
Maanta cadaawaddii oo sideedii ah ayaa ka dhex taagan fannaanad la yiraahdo Kiin Jaamac oo is qaawisa iyo wadaad Bashiir Axmed Salaad loogu yeero se isagu isugu yeera gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed. Cid dooratay ma jidho se isagaa iska jeclaaday in uu maalin uun noqdo gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed waa na uu iskala baxay magacaas.
Kiin Jaamac ma mudna in la difaaco, waayo ilaahay iyo Islaanba waa ay ka xishoon wayday oo bawdyaheedii baa ay shaarica soo dhigtay se taas macneheedu maahan in wadaadkaasi uu arrintaas darteed gabadhaas u nacay. Wadaadkaasi nacayb uu afsoomaaliga u qabo ayaa uu gabadhaas kala dul dhacay se haddii ay carabi ku heesi lahayd, qaawanaanteeda dan kama uu galeen ee waa uu u ducayn lahaa maadaama ay ku heesayso af uu aad u jecel yahay. Nasiibxumo gabadhaasi afsoomaali baa ay ku heestaa waa na sababta uu u liqi kari la’yahay in uu arko naag afsoomaali ku heesaysa.
Haddii la rabo in ay heshiiyaan Kiin Jaamac iyo ninkaas lagu magacaabo Ina Salaad waa in Kiin Jaamac afcarabi ku heestaa oo weliba “Wayxak yaa akhii” tiraahdaa, waxaa hubaala in la arkayo wadaadkaas oo safka hore ka leh “Jaasakallah yaa ukhtii!”
Afeef: Aragtida maqaalkan waa mid u gaar ah qoraha ku saxiixan.
W/Q: Axmed Nuur 19th April 2018